Mkpọmịkasị na-atụ aro Ọrụ Ntanetị Weebụ
A na-achọ scrapers web iji wepu data site na weebụsaịtị dị iche iche ma mee ka usoro ịgba aghara kwụsị. A na-eme ha na Python, Java, Ruby, C ++ na asụsụ ndị ọzọ na-emepụta ihe nakwa na a na - akpọ ndị na - ewe ihe nchịkọta data ma ọ bụ ndị na -. N'ebe a, anyị na-edepụta ndepụta kachasị mma na ntanetị weebụ na Intaneti.
Scrapebox abụghị naanị ihe ntanetị weebụ kamakwa ihe nchọgharị SEO zuru ezu. Ọ dabara maka SEO ụlọ ọrụ, freelancers, na webmasters; ụfọdụ n'ime ihe ndị dịpụrụ iche ya bụ ntanetịgharị nyocha, nchịkọta isiokwu, nchịkọta nnọchiteanya, ikwu okwu, na njikọ nlele. Ọzọkwa, ngwá ọrụ a na-enyocha peeji nke ọkwá, na-emepụta ndepụta RSS, na-adọta adreesị email, na-ahụ ngalaba ndị a na-edeghị aha, ma na-arụ ọtụtụ ihe aga-eme. Scrapebox dị mma maka ma onye ọrụ na onye ọrụ.
Ngwudata ntanetị weebụ a agbanwuru maka oge ụfọdụ. Bubata. ọ na-ahapụ gị ka ị gbanwee ibe weebụ n'ime API kwesịrị ekwesị na naanị clicks. Ọ na-eme ka ọ dịrị gị mfe iwepụta ozi site na weebụ. O nwere ọtụtụ atụmatụ ma nwee ike ijikwa ebe siri ike ma dị mfe n'otu oge.
iMacros bụ otu n'ime ihe nchịkọta data kasị mma na Ịntanetị. Ọ na-enye gị ohere ịnakọta ma nyocha data dịka ọ bụla ị chọrọ. Ngwá ọrụ ngwá ọrụ a na nbudata ederede, ihe oyiyi, na vidiyo. Na iMacros, ị nwere ike mbubata ma ọ bụ bufee ozi gaa na XML na CSV faịlụ. Ọ dị mma maka ndị ọchụnta ego na ụlọ ọrụ ma rụọ ọtụtụ ọrụ n'otu oge ahụ.
Ngwá ọrụ bụ otu n'ime ọrụ ntanetị ndị a ma ama. Ọ bụ onye ntanetị dị elu, na-eji usoro na ịhazi ozi gbasara weebụsaịtị na blọọgụ dị iche iche. Ụfọdụ n'ime ọrụ ya ndị a ma ama bụ nhazi data, ntinye ihe ọmụma, na ebe nchekwa akụkọ ihe mere eme. Ọ na-eme ka ị nweta uru site na API akọwapụtara ya nke ọma ma mee ka ọrụ gị dị mfe.
Mozenda dị mma maka obere ụlọ, ọkara na nnukwu ụlọ ahịa. Ọ bụ ihe nchịkọta weebụ dị ike ma wepụta ọdịnaya sitere na ibe weebụ dị iche iche. Na Mozenda, ị nwere ike ịnakọta ma hazie ozi ahụ n'ụzọ dị irè. Ejiji nke igwe ya na-achota nkwụnye ngwangwa ngwa ngwa, na njedebe ruo n'ókè. Ọ dịghị achọ ọrụ ọ bụla ma nwee ike ịrụ ọtụtụ ihe aga-eme n'otu awa.
PromptCloud mara maka nchịkọta weebụ ya na aha ya. Ọ na-eme ka ị nwuo ma wepụ ọtụtụ data sitere n'ọtụtụ mmalite na asụsụ 130 karịa. Enwere ike ịchekwa data ma ọ bụ ebudata na draịvụ ike gị maka iji ọrụ ntanetị. Ị nwere ike ịlele nyochaa ebe nrụọrụ weebụ, mkparịta ụka mkparịta ụka, ebe nrụọrụ weebụ na mgbasa ozi na akụkọ ozi na ngwá ọrụ a. PromptCloud na-arụ ọrụ dịka onye na-agba ngwa ngwa ma na-edepụta ibe weebụ gị mgbe nile iji chọpụta ọkwa dị mma search engines.
Debuggex, Inc nyere ikikere ParseHub. Ọ bụ otu n'ime ọrụ kachasị mma, dị ike na nke a ma ama na weebụ. A na-eji nchịkọta Chrome a mee ka saịtị dị ike gbanwee ihe ọmụma na-agbanwe agbanwe. Maka ndị mmemme na ndị mmepe, ngwá ọrụ a na-enye njikwa zuru oke maka usoro nke data.
WinAutomation ikikere site na Softomotive Ltd. Ọ bụ ngwá ọrụ akụrụngwa zuru oke nke na - enye gị ohere ịmegharị ihe aga-eme. Ọ na-eme ka nbudata data, na ntanetị weebụ dị mfe ma na-enye nsonaazụ ziri ezi. Ngwaọrụ a dị ọhụrụ ma nwee ọtụtụ atụmatụ: ị ​​nwere ike ịchekwa data amịpụtara na faịlụ Excel ma ọ bụ Google Drive maka udo gị. I nwekwara ike mbupụ data gaa na XML, RSS na JSON Source .